June 2016 - Sawirrotv
Faaf Faahinno Dheeraad ah oo Ka Soo Baxaya Qaraxii Saaka ee Gaariga BL-ka (SAWIRRO)
June 30, 2016 – Waxa ay warar dheeraad ahi ka soo baxayaan qarax miino oo wadada dhinaceeda lagu aasay ay saakay galaafatay gaari BL ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah , qaraxan ayaana ka dhacay Deegaanka Lafoole ee kuyaala Duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxani ayaa la sheegayaa in ilaa iyo hadda ay u geeriyoodeen 12-qof oo …
Turkiga oo Shaaciyay Dhalashada Ragii Weeraray Garoonka Attaturk (VIDEO)
June 30, 2016 – Dowladda dalka Turkiga ayaa sheegtay in saddexdii nin ee ka dambeeyay weerarkii Talaadadii lagu qaaday garoonka Diyaaradaha Istanbul ee Ataturk AirPort ay ahaayeen ajaaniib u kala dhalatay dalalka Ruushka, Uzbekistan iyo Kyrgyzstan oo ah dalal ku yaalla bartamaha Aasiya. Turkiga ayaa aaminsan in weerarkaas ay ka dambeeyeen Kooxda la magac baxday …
Qaraxii ka Dhacay Lafoole (VIDEO)
Waxa ay warar dheeraad ahi ka soo baxayaan qarax miino oo wadada dhinaceeda lagu aasay ay saakay galaafatay gaari BL ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah , qaraxan ayaana ka dhacay Deegaanka Lafoole ee kuyaala Duleedka magaalada Muqdisho.
Shikii Maanta ee Golaha Wasiiradda iyo Culumada Dalka ee Looga Hadlay Gender-ka (SAWIRRO)
June 30, 2016 – Golaha wasiiradda ee dowladda Fedraalka Soomaaliya ayaa maanta shir la yeeshay Culumadii dhawaan Cabashada ka soo saaray Qodobada Siyaasadda Qaranka ee la xiriiray dhanka Jinsiga, si looga qanciyo fasiraadda Qaldan ee laga bixiyay qodobkaasi ayay maanta waxa ay shir la qaateen Golaha Wasiiradda. Golaha Wasiirada iyo Culumadda ayaa dood ka yeeshay …
Ragii Weeraray Garoonka Turkiga (VIDEO)
VIDEO – 1 Warbaahinta Turkiga ayaa sheegay in saddexdii nin ee ka dambeeyay weerarkii Talaadadii lagu qaaday garoonka Diyaaradaha Istanbul ee Ataturk Air Port ay ahaayeen ajaaniib u kala dhalatay Ruushka, Uzbekistan iyo Kyrgyzstan oo ah dalal ku yaalla bartamaha Aasiya. VIDEO – 2 VIDEO – 3
Madaxweynaha oo Guddiga Doorashada Dib u Habeyn ku Sameeyay (AQRISO)
June 30, 2016 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xeer uu soo saaray ku magacaabey Guddiga Doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal oo dib u habeyn kooban lagu sameeyay xubnihiisa. Guddigan ayaa waxaa uu ka kooban yahay 22 xubnood oo magacyadooda ay hoos ku xusan yihiin: 1. Cumar Maxamed Cabdulle 2. Mustaqiim Wayd …
DAAWO: Wadada Wadnaha oo la Saarayo Laami Cusub (SAWIRRO)
June 30, 2016 – Iyadoo Baryahan danbe nadiifin iyo dayactir lagu weday wadada wadnaha ee magaaladda Muqdisho ayaa waxaa saaka la bilaabay in wadada la saaro laami cusub. Waxaana dhismaha laamiga uu ka bilaabanayaa Isgooska Tarabuunka ee Degmada Hodan, waxaana la flayaa in dhawaan wadadaasi dhismaheeda lasoo gabo gabeeyo. Wadada Wadnaha ayaa kamid ah Wadooyinka ugu …
SAWIRRO – Laami Cusub Wadada Wadnaha
Wadada Wadnaha ayaa kamid ah Wadooyinka ugu muhiimsan uguna mashquulka badan ee magaalada Muqdisho, waxaana wadadani aheyed mid si weyn ugu burburtay dagaaladii dalka ka dhacay, iyadoo laga qoday Dhufaysyo waaweyn oo lagu dagaalamo.
Duqayntii Gawaarida Ururka ISIS (VIDEO)
VIDEO – 1 Maalintii Isniinta ayay ahayd markii Ra’iisul wasaaraha Dalka Ciraaq uu ku dhawaaqay in laga guulaystay dagaalyahanadii Ururka ISIS ee ku sugnaa gudaha magaalada Fallujah, Wuxuuna Sheegay inay la wareegeen gabi ahaanba gacan ku haynta magaalada, hadana ay isu diyaarinayaan ciidamadoodu sidii ay uga saari lahaayeen goobaha kale ee ay kaga sugan yihiin …